फेरी घट्यो सुनको भाउ : हेनुहोस् आजको कति ?
इटहरी / साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ ५०० रुपैँयाले घटेको छ । शुक्रबार ६३ हजार एक सय रुपैँयामा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज ५०० रुपैँयाले घटेर ६२ हजार ६ सय कायम भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्त�
2572 पटक पढिएको
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य : हेर्नुहोस् आजको कति ?
इटहरी / साताको चौथो दिन नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ६०० रुपैँयाले बृद्धी भएको छ । सुनको आजको मूल्य विगत ५ वर्ष यताकै सबैभन्दा महङ्गो साबित भएको छ । मंगलबार ६२ हजार ७ सय रुपैँयामा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज बढेर तोलाको ६३ हजार ३ सय �
इटहरी / साताको चौथो दिन बुधबार सुनको मूल्य ओरालो लागेको छ। गत शुक्रबारबाट उकालो लागेको सुनको मूल्य आज ओरालो लागेको हो। हिजो मंगलबारको तुलनामा आज २ सय रुपैयाँ घटेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ६२ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरह
सुनको भाउ यो बर्षकै उच्च : हेर्नुहोस् आजको कति ?
इटहरी / साताको दोस्रो दिन नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । आज प्रतितोला सुनको मूल्यमा २ सयले बृद्धी भएको छ । आइतबार ६२ हजार ३ सयमा कारोबार भएको सुनको मूल्य २ सयले बढेर ६२ हजार ५ सयमा पुग्दै यो बर्षकै उच्च मूल्य क�
इटहरी / साताको पहिलो दिन सुनको मूल्य यथावत रहेको छ । शुक्रबार ६२ हजार ३ सयमा कारोबार भएको सुनको मूल्यमा आज कुनै परिर्वतन नआएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । तेजावी सुन भने प्रतितोला ६२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
फेरी बढ्यो सुनको भाउ, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
इटहरी / साताको दोस्रो दिन सोमबार सुनको भाउ तोलमा रु १०० ले बढेको छ । सोमबार सुनको भाउ तोलामा ६० हजार ९०० मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार सुन तोलामा ६० हजार ८०० मा कारोबार भएको थियो । यस्तै सो�
इटहरी / साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्य २ सय रुपैँयाले घटेकोे छ । शुक्रबार ६१ हजार रुपैँयामा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज दुई सय रुपैँयाले घटेर ६० हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, तेज�
1434 पटक पढिएको